Fan pamusoro pakarepo kuhwina mitambo? Tine yakanakisisa pakarepo kuhwina mutambo zvako. Cash Buster Towers kubva IWG uchitamba mutambo Software Developers rakazara vamwe zvechokwadi zvinonakidza. Zviri pamusoro kugadzira ari Gwenzi uye kuparadza chinogumbura pamusoro peshongwe. Vamwe mavara chaizvoizvo runako dzave kushandiswa mazano inowanikwa pakati mutambo uyu. Ndiyo mutsivi chepakuvamba Cash Buster mutambo. ichi yakanakisisa pakarepo kunda mutambo ane mari mubayiro kusvikira £ 1.000.000. Pane zvimwe zvinoshamisa bhonasi mitambo akaratidzwazve vatambi. The Mumhanzi kwakafanana mafaro sezvo Zvinoonekwa izvi zvinoshamisa mutambo.
Cash Buster Towers Features yakanakisisa pakarepo kuhwina mutambo
ichi Best Instant Win Game ane zvimwe zvechokwadi zvinonakidza uye haisi zvachose kuoma kunzwisisa. The rose kwayo inotenderera shongwe akasiyana chitsvuku kutigumbura kuti rambai muchizadzwa busted ose kuruka. Pane vaviri akasiyana modes kuti kutamba. Chidzitiro ane kuruka bhatani uye uwandu Muruoko rwake anobata chirukiso kurutivi rworuboshwe-ruoko peji. Nechepakati, pane zvidhinha mumwe wavo ane uwandu mubayiro kutaurwa pamusoro pavo. Kurutivi rwokurudyi ndiro tafura unoratidza nhamba yenyeredzi unganidzwa nemiseve. Unogona kuchinja vachibhejera zvinhu kuburikidza nekudzvanya pamusoro + uye – mabhatani pamadziro.
The Gameplay izvi Best Instant Win Game zvakawanda nyore kupfuura zvikaonekwa. All zvaunofanira kuita chamupidigori ari Gwenzi uye nhamba kuti rinowanika pamusoro Gwenzi achaparadza nhamba iyoyo inoperera kubva shongwe. Pane Normal Play uye Dzokorora Play mutambo modes. In inowanzotorwa kutamba muoti, uri kupiwa 5 Muruoko rwake anobata chirukiso mumwe bheji uye nhamba kubva 1-6 vanoonekwa pamusoro mabhanzi pazasi shongwe. Kune dzinokosha zviratidzo zvitatu; nyeredzi, denderedzwa uye museve chiratidzo. Kana wasvikapo 4-nyeredzi zviratidzo, zvaanopa simba nyeredzi bhonasi mutambo. Museve chiratidzo refills shongwe yose chinogumbura kamwe zvakare uye kana iwe unganidza 4 izvi, Museve bhonasi mutambo kunouya. The denderedzwa chiratidzo anoramba achizadza zvikamu zvacho patafura denderedzwa bhonasi.
Kana hamuna akahwina chinhu ari Normal Play muoti ipapo iwe achapiwa yepachena kuruka pakupera kwayo yainzi wodzokorora kutamba chikabviswa. On kuti kuruka ari Gwenzi icharatidza chete zvinhu zvakafanana inowanzotorwa kutamba chikabviswa; 6 i-nhamba, nyeredzi chiratidzo, Museve chiratidzo kana denderedzwa chiratidzo kana pakarepo mubayiro mari.
ichi Best Instant Win Game ane vamwe chaizvo zvinoshamisa Graphics uye dzevakawanda nechekumashure ruzha. The Gameplay Zvinofadza chaizvo uye chokwadi kuchengeta mutambi pachirauro kwenguva refu. The bhonasi zviratidzo zviri zvikuru nzira kuti mamwe mari kunze winnings zvitsigiro mutambo.